Ikhaya STARS E-EUROPE I-Billy Gilmour Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-Billy Gilmour Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso. Isikweletu ku-IG naku-Twitter
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yombono weBhola ngesiteketiso “Inqubo eNtsha”. Indaba yethu yeBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje.
Impilo nokuvuka kukaBilly Gilmour. Ama-Credits Wezithombe: I-Instagram ne-Twitter.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngekhono likaGilmour lokwenza ukudluliselwa kwezinkinobho kanye neso lakhe eligxile ezinhlosweni. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaBilly Gilmour ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Umlingisi UBilly Clifford Gilmour wazalwa ngosuku lwe-11th ngoJuni 2001 eGlasgow eScotland. Wayengowokuqala ezinganeni ezimbili azalwa ngunina, uCarrie Gilmour futhi kuyise, uBilly Gilmour Sr.
Bazali bakaBilly Gilmour uCarrie Gilmour noBilly Gilmour Sr. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Isizwe saseScotland sobuzwe obumhlophe obunezimpande ezincane ezaziwayo sakhuliswa edolobheni lase-Ardrossan eNyakatho Ayrshire, eScotland lapho sakhulela khona kanye nomfowabo omncane uHarvey Gilmour.
Isithombe esingajwayelekile sikaBilly Gilmour ekhula e-Ardrossan eNyakatho Ayrshire, eScotland. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Ukukhula e-Ardrossan, ibhola kwakuwumsebenzi owakhipha izasasa ezinhle kuGilmour osemncane. Wayevame ukukhahlela kanye nonina ngasemuva komndeni ngenkathi umzukulu wakhe esenkolweni ngokuhamba naye ezinkundleni zemidlalo epaki njalo ngempelasonto.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngenkathi uGilmour eqhubeka nothando lomdlalo webhola, waba nemfundo eyisisekelo eStanley Primary School e-Ardrossan futhi ngemuva kwalokho waya eGrange Academy eKilmarnock ngemfundo yakhe yamabanga aphakeme.
UBilly Gilmour omncane (2nd kusuka kwesobunxele) nabangane ngezinsuku zakhe zesikole zamabanga aphansi. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Lesi sikhungo sokugcina ebesifundelwa eqinisweni, iScotland Football Association's (SFA) Performance School yakhelwe ukwenza isiqiniseko sokuthi ukuthuthukiswa kwamakhono okusebenza kwebhola kuhambisana nezifundiswa nokwenza ngcono amakhono kwezenhlalo.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngaphambi kokuhlangana kukaGilmour neScotland Football Association's (SFA) Performance School, wayenomlando ocebile wokudlala ibhola lezentuthuko ezikhungweni eziningi zokuqeqesha okubalwa iMini Kickers neTass Thistle.
Kwakungaleso sikhathi lapho uGilmour ebuka u-10 weminyaka yobudala lapho athola khona irada ye-SFA eyamlethela eGrange Academy eKilmarnock kanye nokuyibhekisisa eqenjini lebhola lezinyawo laseRanger lapho asechithe khona inqwaba yomsebenzi wakhe wobusha.
UBilly Gilmour usebenzise ingxenye engcono kakhulu yokuthuthuka kwakhe ebusheni eRangers FC. Isikweletu Sezithombe: AmaRanger.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Ngenkathi ngiseRanger academy, ukukhuphuka kukaGilmour ngezigaba kwashukunyiswa isifiso sakhe sokuba ngophuma phambili eqenjini nasekilabhini. Yize lo mdlali owayeneminyaka engu-15-16 ngaleso sikhathi encintisana nabesilisa ababeneminyaka engu-5 futhi eqeqeshwa ngeqembu lokuqala le-Rangers, wayengakakhululeki ekilabhini.
UGilmour owayefunwe kakhulu kunalokho wafuna inhloso ephezulu ngokuphupha ngokuba ngumuntu ohamba phambili emhlabeni, futhi kwavela ukuthi uChelsea waklabalasa ethi "sinomfana omuhle kakhulu wemvelo, woza, futhi athole ithuba lokuguqula udumo".
Ukuphupha amakhulu kwiRanger FC: Amaphupho kaBilly Gilmour ayemakhulu kakhulu kuRanger FC ukuthi angawathola. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
I-Chelsea ithole izinsiza zikaGilmour ngoJulayi 2017 ngemali ebekiwe yaqhubeka nokuhlola amakhono akhe obuchwepheshe nethimba le-Premier Premier League le-U-18 ngaphambi kokumnika inkontileka yakhe yokuqala ngoJulayi 2018.
UBilly Gilmour usayine inkontileka yakhe yokuqala yobungcweti neChelsea ngoJulayi 2018.
Kusukela lapho, abalandeli bamlandele ngokwenkolo uGilmour ukubona ukuthi ingane eyisimanga ingahle ibe yibhola elimangazayo noma umsebenzi wakhe angcwatshwe ngochungechunge lwemalimboleko ngaphambi kokuthi ekugcineni ithengiswe. Kodwa-ke, uGilmour unezinto zenhlanhla naye, ikakhulukazi okwamanje UFrank Lampard izimisele ukusebenzisa amathalenta weBlues 'burgeoning academy.
Selokhu uFrank Lampard waba ngumphathi weChelsea, ikilabhu belisebenzisa kahle amathalenta ezifundo ezinjengoBilly Gilmour futhi UTammy Abraham. Isikweletu Sezithombe: I-SkySports.
Ukuxazululwa kukaLampard kuze kube manje kubonakale ukuthi uGilmour ufakiwe kumdlalo wangaphambi kwesizini iChelsea ibhekene neDublin ngoJulayi 2019 kanye nokuba ifakwe ohlwini lwabangasetshenziswanga umdlalo wamanqamu we-2019 UEFA Super Cup ngokumelene neLiverpool. Ngemuva kwesivumelwano sikaGilmour sePremier League esadlulela kuSheffield ngo-Agasti 2019, sekwanele ukuthi aqaphele ukuthi usezingeni eliphezulu kakhulu futhi ngeke ame kunoma yini ukuze abe ehamba phambili. Abanye, njengoba besho, umlando.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Noma yimuphi umdlali odlala kahle ongahle abukeke njengoGilmour angaba ngcono - ashade noma abe mubi kakhulu, angashadile. Kunoma yikuphi ukuqondiswa kwempilo yothando yomcibisholo wamaphuzu wesimo sobudlelwano bukaGilmours, uthathwa njengendoda eyodwa ngesikhathi sokubhala futhi akanamadodana noma amadodakazi angaphandle komshado.
Umdlali wasesiswini uyakuqonda ukuthi ukuhehwa kungaphezu kokubukeka muhle kepha kudlala kahle. Ngakho-ke, utshalwe imali eningi ekupheleliseni ubuciko bakhe ngosuku njengoba eqala izwe elisha lamathuba ebholeni eliphezulu.
UBilly Gilmour kungenzeka ukuthi akanayo intombi ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: I-LB ne-Instagram.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Ngaphandle kwenkundla yemidlalo emihle kaGilmour ngumndeni okhuthazayo. Sikulethela imininingwane ngempilo yomndeni wakhe.
Mayelana nomama kaBilly Gilmour: UCarrie Gilmour akuyona umama kaGilmour kuphela kodwa ungumlingani ayidlalayo. Ubalule uthando lukaGilmour ngebhola lakuqala ngokufaka isicelo sakhe sokushaya ibhola ekhaya. Ngokushesha phambili kuze kube yimanje, uCarrie uyaziqhenya kakhulu ngokufezeka kukaGilmour futhi ubambe iqhaza ngokuzikhandla ezindabeni eziphathelene nekusasa labadlali abasha kwezemidlalo.
UBilly Gilmour nonina uCarrie. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Mayelana nobaba kaBilly Gilmour: UBilly Gilmour Sr ungubaba kaGilmour. Uke wasebenza eRoyal Navy ngesikhathi esemncane esemncane futhi unomlando ngokudlala ibhola ku-Ardrossan Winton Rovers. Ngenxa yobaba osekelayo, uGilmour wayevame ukuvakashela igumbi lokugqoka leqembu lendawo, intuthuko ethuthukisa ikhono lakhe lokuxuba nokuxhumana namaqembu asebekhulile njengengane.
Mayelana nezingane zakubo kaBilly Gilmour: UGilmour unomfowethu omncane othanda ibhola owaziwa njengoHarvey. Umfowethu omncane omncane ofisa ukuba ngumdlali webhola lezimanga njengoGilmour, ubelokhu engaphansi kweminyaka engu-2 eyakha umsebenzi eKilmarnock FC futhi efunda eGrange Academy SFA Performance School ngesikhathi sokubhala.
UBilly Gilmour nomfowabo uHarvey. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Mayelana nezihlobo zikaBilly Gilmour: Inqwaba yomndeni owandisiwe kaGilmour ohlanganisa ogogo nomkhulu kanye noyise, kanye nomalume wakhe, oomalume, abatshana nabazala wakhe usazokhonjwa ngesikhathi kubhalwa.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Uyazi ukuthi uGilmour ufaka izici zobuntu obuhle ezibandakanya ukuthobeka, ukugxila kanye nobuhlakani bezemizwa. Kungezwe ku-Gilmour's persona yisipho sakhe sobuntu bokukhuluma nokukwazi ukuxhumana nabanye.
Le nsizwa ethembisayo eqondiswa isibonakaliso sikaGemini Zodiac ngesizotha iveze imininingwane emayelana nokuphila kwakhe komuntu siqu ngenkathi izintshisekelo nezinto zokuzilibazisa kwakhe ezithatha izithombe, edlala imidlalo yevidiyo, elalele umculo, ebuka ama-movie futhi echitha isikhathi esiningi nabangane nomndeni.
UBilly Gilmour ube nesikhathi esihle nemidlalo yamavidiyo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Ukuqhubekela phambili nempilo kaGilmour, unenani elincane elaziwa ngokunyuka kwezimakethe ngenkathi inani lakhe elifanele lisabhekwa ngesikhathi sokubhala le bio, akukho ukubonga ngokuba ngumholo ophansi.
Ngenxa yalokhu, ingcweti yebhola lezinyawo ebigubha usuku lwayo lokuzalwa lwe-18th ngoJuni 2019 okwamanje ngeke iphile impilo yobukhazikhazi yabachithi abakhulu ngezimoto nezindlu ukukhombisa ukungahambi. Ngaphandle kwalokho uyazi ukuthi angaguqula kanjani iGucci igqoke phakathi kweminye imikhiqizo yezingubo evumelana nesitayela sayo.
UBilly Gilmour ushintsha indlela yokugqoka yeGucci ngesikhathi sokugubha usuku lokuzalwa kwakhe lwe-18th. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weBilly Gilmour Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukubhalwa kwendaba yethu yobuntwana kaBilly Gilmour kanye ne-biography, nawa amaqiniso angaziwa noma awaziwa kancane ngaye.
Ukubhema nokuphuza: UGilmour ungummeli wokuqina nempilo enhle. Ngakho-ke unamathela kunoma yini evimbela impilo kahle ikakhulukazi ukubhema kanye nomkhuba wokuphuza ngokweqile.
Inkolo: Inkanyezi ekhuphukayo ayiveli njengenkolo ngenkathi inika izingxoxo zokuxoxisana, futhi ayibonwanga igqoke imihlobiso eveza ubudlelwane bayo nenkolo. Ngakho-ke angeke kwaziwe ngokusobala ukuthi uyikholwa noma cha.
UFrank Lampard osemdala omuhleUyazi ukuthi uGilmour wazalwa ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuba uFrank Lampard asayine iChelsea e-2001? Ngaphezu kwalokho, uGilmour wakhula ekhonza uLampard futhi unethemba lokuphinda enze kahle impumelelo yakhe e-Chelsea.
UFrank Lampard ukhonjwe ezenzakalweni eziphakeme kakhulu zokuphila kukaBilly Gilmour esemncane kuze kube yimanje. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Ama-tattoos: UGilmour ngaphandle kwama-tattoos ngesikhathi sokubhala. Lokhu kungahambi kahle kuye kuthande ukuthi angatholi noma yibuphi ubuciko bomzimba ngoba isibalo esihle sabadlali abamaphakathi njengamanje abangaphansi kwakhe abanawo ama-tattoos.
Isizathu ngemuva kwesidlaliso: UGilmour wabizwa ngokuthi "New Modric" ngabezindaba ngenxa yekhono lakhe lobuchwepheshe ukwenza ukuphumelela ukhiye ngisho nalapho ecindezelwe njengezakwabo zaseCroatia.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iBilly Gilmour yethu Yobuntwana Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.